တိုက်ကြီး၊ သပြုရွာကို ညသန်းခေါင် စစ်သားများ ဝင်စီးပြီး ရွာသားတချို့ကို ဖမ်းဆီး - Myanmar Pressphoto Agency
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ် သပြုကျေးရွာရှိ သားအဖ နှစ် ဦးနှင့် လူငယ် နှစ် ဦးအား ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက် ည ၁၁နာရီချိန်ခန့်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များ ဝင်ရောက်စီးနင်း ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။စစ်ကောင်စီတပ်သား ၁၀၀ နီးပါးဖြင့် ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်စီအားတော်လှန် ရေးလုပ်သည်ဟုဆိုကာ လာရောက်၍ ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း သိရသည်။
” အဲ့ဒီည ၁၁ နာရီလောက်ကြီး စစ်ကား သုံး စီး လူ အပြည့်ပဲ။ ရွာကိုဝိုင်းထားတာ။ ရွာထဲဝင်လာတဲ့အဖွဲ့က သေနတ်တွေနဲ့ချိန်ပြီး ရွာအလယ်လမ်းမှာအကုန်စုပြီးထိုင်ခိုင်း ထားတာ။ ပြီးတော့တစ်ယောက်ချင်း စစ်မေးတယ်။ ပြီးတော့ လူငယ် သုံး ယောက်ကိုဖမ်းတယ်။ သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့ကလို့တော့ပြောတယ်။ ဘာတွေလုပ်လို့ဖမ်းတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လည်း သေချာတော့ မသိဘူး။ အဲ့ဒီ သုံးယောက်ဖမ်းပြီးတော့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့အဖေကိုပါ ခေါ်ခဲ့ဆိုပြီး ဖမ်းသွားတာ။ ” ဟု ဒေသခံရွာသားတစ်ဦးက MPAသို့ပြော သည်။
ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် လူငယ်များအား မည်သည့် နေရာသို့ဖမ်းဆီးသွားသည်အား မသိရသေးကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများမှ အဆက် အသွယ်ရရှိရန် ကြိုးစားသော်လည်း ယနေ့ထိ အဆက်အသွယ်မရသေးကြောင်း သိရသည်။
” အစက ဒီချင်းကုန်းရွာ တိုင်းဗဟိုတပ်မှာလို့လည်းသိရတယ်။ နောက်ကျ ရန်ကုန်စစ်ကြော ရေးကိုခေါ်သွားတယ်လို့လည်းပြောတယ်။ ခုထိကို ဘယ်မှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာ မသိရသေးဘူး။” ဟု ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် လူငယ်တစ်ဦး၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
စစ်ကောင်စီတပ်များအနေဖြင့် ဒေသအသီးသီးရှိ ကျေးရွာ/ရပ်ကွက်များသို့ PDFများ အကြောင်း ပြကာ ဥပဒေမဲ့ ဝင်ရောက်စီးနင်းခြင်းများ ပြုလုပ်နေပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ၉၀၀၀ ကျော်ထိ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
#တိုက်ကြီး #လူငယ် ၃ ဦး #ဖမ်းဆီးခံရ #စစ်ကောင်စီ #MPA
SAC Arrests Young Villagers in Taik Gyi Township
It has been reported that the SAC military forces raided Tha Pyu village in Yangon’s Taik Gyi township on July 21 at about 11pm and arrestedafather andason and two young men.
They were raided with 100 military forces accusing them of involvement in activities against the SAC military.
“That night, at about 11pm. Three military trucks arrived full of soldiers. They seized the village. They came inside the village, had the people gather on the street and interrogated each one. Then, they arrested three young men saying they were involved inaresistance group against them. We don’t know for what activities they were arrested. They arrested three and had one of them call his father too,” saidalocal villager to MPA.
Nothing has been known about where they are being kept and family members are still not able to contact them.
“First, we heard they were at Chin Kon village and next at the Yangon military interrogation. We have no idea where they are detained now,” saidafamily member of one of them.
In different areas (villages), more than 9000 have been lawlessly arrested by the military accusing them of connecting with the PDF.
#TaikGyi #Youths #Arrested #SAC #MPA
Tags: militarycoup MPA Myanmar News PDF Taikkyi
Next: မော်လမြိုင်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှု​ကြောင့် လူနေရပ်ကွက်အချို့ရေနစ်မြုပ်